Fanala volo ho an'ny alika, hadinoy ny volony eo amin'ny sezal, kapoka ... | Tontolo alika
Ny fananana alika dia misy zavatra tsara maro: mamoha anao amin'ny maraina, miaraka aminao amin'ny sakafo maraina, ary miandry anao hiverina handany fotoana miaraka aminao. Ny olana dia indraindray ny fotoana laniny ao an-trano no mahatonga azy mandatsaka volo. Ahoana raha eo amin'ny farafara ity? Sa amin'ny fitafianao? Azo antoka, mila mpanala volo ianao.
Raha te hahalala ianao hoe iza no be mpanondro indrindra ary aiza no hividianana fanesorana volo isaky ny toerana ao an-tranonao, dia omenay anao daholo ny fampahalalana ilainao.
1 Ny manala volo tsara indrindra
2 Karazana fanalana volo
2.1 Fanesorana volo ho an'ny karipetra, akanjo ary sofa
2.2 Roller manala volo
2.3 Borosy fanesorana volo
3 Ahoana ny fomba hisorohana ny alika tsy handraraka volo be loatra
4 Toerana ao an-trano izay misy volo foana
4.1 ambony seza
5 Mahomby ve ny fanalana volo ho an'ny alika?
6 Aiza no hividianana remover volo
Ny manala volo tsara indrindra
Ity misy santionan'ny mpanala volo izay fantatray fa miasa ary ahafahanao manala mora foana ny volo avelan'ny alikao hatraiza hatraiza:
ACE2ACE Hair Remover ary ...
Fanesorana volo ho an'ny biby ...
2 Pcs Fanala volo...
Karazana fanalana volo
Eny an-tsena dia tsy mahita karazana mpanala volo fotsiny ianao, fa manana modely maromaro misy. Ny sasany mifantoka bebe kokoa amin'ny sehatra manokana, toy ny akanjo, tapis sns. Raha ny hafa kosa manerantany kokoa, afaka mampiasa azy amin'ny ankapobeny. Te hahafantatra izay ao ve ianao?
Fanesorana volo ho an'ny karipetra, akanjo ary sofa
Ny lehibe kokoa dia mamela anao handrakotra faritra lehibe kokoa. Miorina amin'ny rafitra roller, fa misy ny sasany sophisticated kokoa noho ny sasany, toy ireo manangona ny volo ary mampita izany amin'ny faritra iray mba hadio foana.
Roller manala volo
Izy ireo dia misy varingarina mihodina, matetika miraikitra na ao izay volon'ilay alika no miraikitra mba hanesorana azy ireo amin'ny habakabaka.
Izany no iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny sehatra kely sy salantsalanyRehefa mandeha ny roller dia very ny fifikirana rehefa mameno volo.
Ny lesoka iray dia ny hoe, rehefa miraikitra ny volo, dia mety ho sarotra ny manasaraka ary farany reraka (miasa fotsiny amin'ny fampiasana vitsivitsy).
Borosy fanesorana volo
Ity no mora vidy indrindra sy fantatry ny rehetra. Ahitana a Fanesorana volo amin'ny tanana misy elongated izay tsy maintsy lalovanao manaraka ny torolàlana voalaza hahafahana manala volo amin'ny akanjo na any ivelany hafa.
Aorian'izay dia tsy maintsy apetrakao ao anaty karazana boaty izay manasaraka ny volo amin'ilay borosy hampiasana azy indray toa ny vaovao.
Ahoana ny fomba hisorohana ny alika tsy handraraka volo be loatra
Misy tokoa antony isan-karazany amin'ny alika mandatsaka volo. Ny sasany dia ara-dalàna, toy ny eo ampovoan'ny fandatsahana ny volony, na ilay biby mihitsy no mora very volo (toy ny ataon'ny olombelona). Ny hafa dia vokatry ny antony hafa, toy ny aretin-katsentsitra, ny tsy fihinanan-tsakafo, ny adin-tsaina ...
Amin'ny ankapobeny, ny volo very tsy mila fitsaboana, fa tokony hiezaka hahalala ny antony hanandramana hanafoanana azy ianao ary mijanona tsy misintona ny volony ilay biby. Midika izany:
Hamarino raha ampy ny sakafo. Raha izany dia ho hitanao fa malefaka, matanjaka, mamirapiratra ary miloko ny volon'alikao.
Mitondrà deworming anatiny sy ivelany. Mba hisorohana ny katsentsitra amin'ny fahasalamanao.
Mampiasà vokatra manokana ho an'ny fahadiovanao. Manokana, shampoo voatondro ho an'ny alika ary aza be loatra amin'ny fandroana (ampy iray isaky ny roa volana).
Ny maha-zava-dehibe ny borosy. Ny fikosehana isan'andro, na imbetsaka isan-kerinandro, dia tena zava-dehibe, satria tsy vitan'ny manala ny volo maty amin'ny biby fiompinao ianao (ary noho izany tsy avelany eo amin'ny tany, akanjo, sofa, sns.) Fa mandany fotoana amin'izany ianao.
Tadiavo ny anton'ilay olana. Ohatra raha sendra adin-tsaina, fitaintainana ...
Aza adino fa ny alika dia manova palitao indroa isan-taona, mba hifanaraka amin'ny maripana ambony na ambany. Ary koa, misy ny sasany izay manana hoditra marefo kokoa.
Toerana ao an-trano izay misy volo foana
Alika ao an-trano, na tiantsika na tsy tiana, dia handrotsaka volo. Raha tsy manao an'io izy, mazava ho azy. Nefa mitovy amin'ny an'ny olombelona izany. Very 100 eo ho eo isan'andro ny volontsika, ary zavatra mitovy amin'izany no mitranga amin'izy ireo satria tsy maintsy manavao ny volony izy ireo.
Fa ny mazava dia izao, na volon'olombelona na volo alika dia tsy dia tsara amin'ny akanjo, amin'ny sofa, ao anaty fiara ... Ary afaka manome endrika fanaovana tsirambina sy tsy fahadiovana. Noho izany, ny toerana lehibe ao an-trano izay tokony hifantohanao rehefa mividy fanesorana volo dia ireto manaraka ireto:
Matetika ny sofa dia mipetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ary, raha tsy nampianarinao ilay alika fa io no habakanao, dia mahazatra azy ny miakatra eo amboniny, ary mamela volo izany. Na dia tsy mandeha aza ianao, amin'ny fikosehana ny kontiny dia azonao atao ny mamela azy ireo.
Amin'ireny tranga ireny ny remover volo tsara indrindra azonao ampiasaina dia ilay roller, satria ny fihazakazahana ety an-tany dia ho mora aminao ny manafoana ny zava-drehetra. Ny iray hafa izay afaka manampy anao dia ny iray manokana ho an'ny akanjo, sofa ary rug.
Betsaka ny olona mampiasa karazana akanjo iray any an-trano ary iray hafa hivoaka. Fa ny alika mazàna dia tsy mahatakatra an'izany ary, amin'ny farany, manakaiky ny sakaina izy ireo isaky ny afaka manao izany. Noho io antony io, raha manao akanjo eny an-dalambe ianao dia afaka mahita volo be dia be manimba ny bika aman'endrinao.
Ny vahaolana hanalana azy? Fanala volo ho an'ny akanjo, sofa ary karipetra, ary koa ny borosy fanesorana volo (eny, amin'ny akanjo tsy marefo).
Ny karipetra dia iray amin'ireo toerana ahafahan'ny alika mamela ny ankamaroan'ny volo, satria eo ambony izy io, satria mikosoka azy ireo, sns. Ka ahoana ny fanesorana ny volo dia holazainay aminao hifantoka amin'izay izy ireo manokana ho an'ny karipetra, akanjo ary sofa. Raha miaraka amina tsato-kazo telesopika koa izy ireo, na lehibe, tsara kokoa noho izy io satria handrakotra ny faritra misimisy kokoa ianao.
Entinao any amin'ny mpitsabo biby ve ny alikanao? Sa rehefa mivoaka ianao dia manao azy miaraka aminy? Amin'ny farany, ny karipetra sy ny seza dia hiafara amin'ny volon'ny alikanao izay tsy maintsy esorinao.
Amin'ity tranga ity dia mamporisika ihany koa ireo izay manokana ho an'ny sofa, rugs ary akanjo izahay satria tena mandaitra amin'ireo sehatra ireo. Fa raha tianao karazana hafa, miloka amin'ny roller.
Mahomby ve ny fanalana volo ho an'ny alika?
Tsy hilaza aminao izahay fa ny fanesorana volo dia hanafoana tanteraka ny fahitanao ny volo amin'ny sofa, amin'ny tany na amin'ny akanjo. Raha tsy voatsabo ny antony mahatonga ny alika handatsaka volo dia tsy hatsahatrao izany.
Nefa afaka milaza izany aminao izahay mandaitra izy ireo satria manala volo be dia be. Eo anelanelan'ny fikosehana, sy ny fanadiovana mahazatra (raha tsy isan'andro) dia azonao atao ny manadino ny volo.
Aiza no hividianana remover volo
Raha te hampijanona ny volon'ny alika mandrakizay ianao, na amin'ny fitafianao na na aiza na aiza itoerany, ireto no fivarotana lehibe hahitanao vokatra.
Amazon: Amazon angamba no iray amin'ny toerana voalohany alehantsika rehefa te hividy zavatra isika. Manokana, amin'ny remover volo dia ho hitanao samy hafa manala volo, manomboka amin'ny manual ka hatramin'ny mandeha ho azy.
Ikea: Ao Ikea izy ireo dia miahy izay rehetra amidiny, ary izany no antony ahitanao ireo manala volo ho an'ireo izay manana alika ao an-trano mba tsy ho feno volo ny fanaka. Eny tokoa, tsy manana katalaogy malalaka be izy ireo, fa eny ny kalitao.
kiwiko: Kiwoko dia iray amin'ireo fivarotana mifantoka amin'ny vokatra ho an'ny biby fiompy. Noho izany, eto dia azonao atao ny mahita Ireo manala volo izay tena miasa ho an'ireo alika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Fanesorana volo